Football Khabar » रोनाल्डोले एथ्लेटिको मड्रिडविरुद्ध खेल्नेमा शंका
रोनाल्डोले एथ्लेटिको मड्रिडविरुद्ध खेल्नेमा शंका
एजेन्सी, मंसिर ९
युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा भोलिब मंगलबारबाट समूह चरणअन्तर्गत पाँचौं राउन्डका खेलहरू हुँदैछन् । यसअघि नै अन्तिम १६ मा स्थान बनाइसकेको इटालियन युभेन्टस भोलि आफ्नो पाँचौं खेल स्पेनिस एथ्लेटिको मड्रिडसँग आफ्नो घरमा खेल्दैछ ।
सो खेलमा युभेन्टसका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल्ने अनिश्चित बनेको छ । हालै मात्र चोटमुक्त भएर टोलीमा प्रशिक्षण थालेका रोनाल्डोले युभेन्टसको घरेलु मैदानमा आफ्नो पुरानो प्रतिस्पर्धी एथ्लेकोटिविरुद्ध खेल्ने अनिश्चित भएको हो ।
सो कुरा युभेन्टसका प्रशिक्षक माउरिसयो सार्री स्वयंले बताएका छन् । खेलअघि सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सार्रीले रोनाल्डोको अवस्था सुधार भए पनि उनले एथ्लेटिकोविरुद्ध खेल्ने–नखेल्ने निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘क्रिस्टियानोले हिजो समूहमा प्रशिक्षण गरे । र, उनको अवस्थामा निकै सुधार देखिन्छ । तर, हामी अझै पनि उनको अवस्थाको मूल्यांकन गर्नेछौं । र, उनीसँग छलफल गरे खेल्ने वा नखेल्नेमा निर्णय लिनेछौं ।’
सार्रीले रोनाल्डोसँग आफ्नो सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको भनेर मिडियामा आएका सबैखाले खबरको पनि खण्डन गरेका छन् । रोनाल्डो च्याम्पियन खेलाडी भएकाले सब्सिच्युट हुँदा नराम्रो लाग्नु सामान्य भएको उनले बताए ।
सार्रीले भने, ‘क्रिस्टियानोसँग मेरो सम्बन्ध धेरै राम्रो छ । यदि कुनै खेलाडीले करिअरमा धेरै जितेको छ भने प्रतिस्थापित हुनुपर्दा रिसाउनु सामान्य हो । यसको अर्थ त्यो खेलाडीसँग अझै पनि प्रशस्तै ऊर्जा र क्रियाशीलता छ भन्ने हो । यो त प्रशिक्षक र टिमका लागि पनि राम्रो कुरा हो ।’
एथ्लेटिको रोनाल्डोका लागि खास प्रतिस्पर्धी हो । च्याम्पियन्स लिगमा यदि कुनै पनि खेलाडीले सिंगल क्लबविरुद्ध सर्वाधिक बढी गोल गरेको छ भने त्यो रोनाल्डो हुन् । र, क्लब एथ्लेटिको मड्रिड हो । गत सिजन पनि युभेन्टसले एथ्लेटिकोलाई अन्तिम १६ बाट आउट गराउँदा रोनाल्डोले सनसनीपूर्ण ह्याट्रिक गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति ९ मंसिर २०७६, सोमबार २०:०३
चेल्सी र टोटनह्यामको बराबरी : टोटनह्याम शीर्ष स्थानमा उक्लियो
युनाइटेडको उत्कृष्ट कमब्याक जितमा काभानी बने नायक !
म्याराडोनाको ‘ओल्ड ब्वाइज जर्सी’मा मेस्सीद्वारा भावुक श्रद्धाञ्जली अर्पण
बार्सिलोनाको शानदार जित : मेस्सीको गोल म्याराडोनालाई समर्पण
पहिलो हाफमा ओसासुनाविरुद्ध बार्सिलोनालाई २–० को अग्रता !
म्याराडोनाको ‘शवसँग सेल्फी खिच्ने’ तीन कर्मचारीको जागिर चट् !
छाडेन चोटले : रियल कठिन अवस्थामा पुग्दा हाजार्ड फेरि घाइते
प्रिमियर लिगमा आज चेल्सी र टोटनह्यामको रोमाञ्चक खेल हुँदै
आज बार्सिलोना र ओसासुनाको खेल : मेस्सी मैदान फर्किंदै